Bamashele esisolwa ngokudayisa ukudla okubolile kwaMaphumulo | News24
Bamashele esisolwa ngokudayisa ukudla okubolile kwaMaphumulo
PHOTO: nkosinathi dubeIzinkumbi zamalunga kaANCYL kuGreater KwaDukuza Region emashela isitolo sakwaSpar kaMaphulo.
Amalunga entsha kaKhongolose ngaphansi kwesifunda I Greater KwaDukuza angene emgaqweni bemashela izikhalo abanazo ngesitolo uSpar kwaMaphumulo ngolesihlanu zi-9 kuMasingana.
Izinkulungwane zamalunga alenhlangano ebezivela ezindaweni ezahlukene kulesisifunda saKwaDukuza ahlangane endaweni yakwaTshobho ngaphambi kokuba alibangise kulesi sitolo esisenkabeni yedolobha kwaMaphu- mulo.
Lemashi ibiholwa yilowo ongusihlalo waloluphiko esifundazweni uKwazi Mshengu.
Phakathi kwezikhalo ebebeyozidlulisa kubalwa ukudayiswa kwempahla engekho emgangathweni yilesi sitolo, ukuxhashazwa kwabasebenzi, ukungawulekeleli ngalutho umphakathi yilenkampani kanye nokuholela abasenzi ngemali encane.
Ekhuluma nentsha kulemashi usihlalo wololuphiko esifundazweni uKwazi Mshengu uthe angeke bavumele isithuunzi somuntu omnyama sidicilelwe phansi.
“Siyintsha siwuqonda kahle umzabalazo esibhekene nawo lowomzabalazo ngowokuvikela isithunzi somuntu omnyama ngalokhu sithi silindi abaphathi bakaSpar bazisukumele phezulu lezizikhalo zethu, uma behluleka kwenza lokho ngeke sigcine kphela ngokuqhanqalaza kepha sokhempa phakathi kwaso isitolo,” kubeka uMshengu.
Ubuholi baloluphiko lube selufuna ukuba abaphati noma abanikazi besitolo kube ibona abaziokhuluma nabo mayelana nelezikhalo abazilethile futhi baphinde bazibophezele ukuba bazozilungisa. Kodwake lokho akuzange kwenzeke njengoba uhlu lwezikhalo lugcina lwamukelwe omunye wezisebenzi zalenkampani.
Efunda uhlu lwezikhalo loyo unguNobhalo weANCYL kulesifunda uMusa Zondi uthe beyintsha yase Greater Kwadukuza emveni kokuzwa izikhalo eziphindiwe emphakathini othenga kwaSpar sebethathe isinqumo esiphusilo sokuzwelana nabatu ekutheni bebhekane nqo nomsuka wenkinga yabo.
“Silapha nje sonke ukuzothula izikhalo nokucikeka kwabantu bakwaMaphumulo wonkana esekwiyiminyaka bexhasa lesistolo ngezimali zabo ezisetshenzwe kanzima. Siyi ANCYL KwaDukuza sifuna abaphathi bakwSpar basukumele zonke lezikhalo esizenazo ezinsukwini ezingevile kwezi-31,” usho kanje.
Kuke kwasuka esinamthambo ngenkathi iqulu lababemasha bevuka indlobane befuna ukuzingenela kulesisitolo nokuholele ekutheni batholane namaphoyisa nabahlakaze ngesisi esikhalisa unyembezi.
Kusize ukubakhona kwabaholi baloluphiko nabahlenge isimo, abesitolo bebengakaphawuli ngomonakalo odalekile nkathi kuhiliziswana..
Abaphathi besitolo bagcine belamukela futhi balusayinda uhlu lwezikhalo bathembisa ukuxazulula ezinye zezinkinga ezinsukwini ezi-7 koda phakathi kwakho lokho bazoba nomhlangano nabanikazi besitolo kanye ne REC ye ANC.